Hevitra MPANOHARIANA | Martsa 2009
Nisy tantarany ny rotaka teto 67ha ny sabotsy 7 marsa 2009 teo
2009-03-07 @ 22:38 in Andavanandro
Mety ho variana isika tamin'izay mety ho fifampitorahana teo amin'ny mponin'i 67ha avaratra sy ny mpanao fihetsiketsehana ny 7 marsa 2009. hiezaka aho ny hanao fohy ny resaka mba tsy hahamonamoaina loatra, fantatrareo ihany ny fombako tsinona. Rehefa tsy navela hanao fihetsiketsehana teo amin'ny kianjan'ny 13 mey ny mpitokona nanomboka ny alarobia 4 martsa 2009 dia nisy ny fifanandrinana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny tanora mafana fo tamin'ny mpanao fihetsiketsehana nanodidina an'Analakely, toy ny teo Behoririka sy Soarano ary petite vitesse sy Ambohijatovo.
Ny ampitso (alakamisy 5 martsa 2009) dia tsy ny fakana an'Analakely intsony no nahamaika ny mpanao fihetsiketsehana fa ny hanaparitaka ny barazy manerana ny tanàna. Izany no natao dia ny mba hiparitahan'ny Emmo nat, ka rehefa mety hiparitaka nefa ahiana tsy ho ampy isa dia mety ho resy tosika ho azy. Nahay niparitaka tsara anefa ny Emmo nat ka tsy nampoizin'ny mpanao barazy ny halakin'ny fahatongavan'ny mpitandro ny filaminana. Tsorina fa betsaka ny faritra nametrahan'ny sasany barazy no vetivety dia rava tongavan'ny Emmo nat. Ny tena nafana vay indrindra tamin'ity andro ity dia ny teny amin'ny lalam-baovaon'Ankazomanga izay nahazoan-dry zalahy tao amin'ny Emmo nat nefa tsy nanana fiara handraofana ny azo ry zalahy. Tamin'ny alalan'ny 4X4 pick up manko no nandehanan'ny mpitandro ny filaminana, ary ny mahagaga ahy dia avy any amin'ny faritra tsy ampoizin'ny mpanao barazy hatrany amin'ny ankapobeny no ahatongavan'ny mpanao fihetsikatsehana. Rehefa nisy noho izany ny tratra nefa tsy tonga tany ny fiarabe mpitondra ny azo sambobelona vitsivitsy dia nakipilin-dry zalahy any anaty tatatra lehibe ireo tratra ireo, ny kendren'ny mpitandro ny filaminana dia ny hahakotsan'ny ranondolana an-dry zalahy tratra ireto. Nisy ny nahay niala ka tsy kotsa ny akanjony nefa dia noteren'ny mpitandro ny filaminana handena ny volony amin'ny rano. Valifatin'ny mpitandro ny filaminana no nanaovany izany.
Nifanenjika nanerana ny tanàna hatrany anefa ny mpanao barazy sy ny mpitandro ny filaminana, ny mpanao barazy moa mitaky vola amin'ny mpitondra fiara ka izay mahasahy mandà tsy manome vola dia vakiany fitaratra avy hatrany, maro dia maro ry zareo mandritra izany fotoana izany. Nitranga izany hatreny Talatamaty, Imerinafovoany, Ankazomanga vao nolazaina teo, 67ha, Ankorahotra, Ambanidia sns... ary izy rehetra ireo dia samy mitonona ho Andrimasom-pokonolona avokoa. Maro noho izany no tsy nitondra fiarany teto an-tanàna ka toy ny andro alahady hatrany ny tanàna. Tsy mijanona amin'ny toerana iray mihitsy noho izany ny mpandroba fa mivezivezy mandrakariva. Nisy ary ireo mpandroba nifanenjehana nanerana ny lalan'Ampefiloha, mandalo an'Andavamamba, Tanambao, Ambodin'isotry sy 67ha.
Nisy noho izany tamin'ity andron'ny alakamisy 5 martsa 2009 ity ny mpandroba nandrahona ny taty amin'ny 67ha avaratra misy anay, mitady izay ho TIM hoe ry zareo hifampitana aminy. Nanafika ny sisiny atsimo indrindra tamin'ny fokontany nisy anay ary ry zalahy tokony ho tamin'ny 6 ora sy sasany hariva teo ho eo. Resy tosika aloha ny tanora tamin'ireo faritra notafihiny ireo ka niantso fanampiana tamin'ny quartier hafa ry zareo. Nirohotra ny maro tamin'ny vatandehilahy... tsy anavahana io na TIM na TGV hanifika ireto mpandroba ireto. Resy tosika ry zalahy (efa fantatra rahateo fa ny hamaky magazay no tanjony tsinona) nefa nandrahona fa hamaly faty ny ampitso (zoma). Mbola tafajanona tany amin'iny faritry ny arabe roa (manoloana ny Ny Havana) iny ihany anefa ireto mpandroba ireto nanakan-dalana. Efa ren'ny vatan-dehilahy teto amin'ny fokontany nifanandrina taminy ilay fandrahonana hamaly faty, sady haka namana hafa, koa dia nifanome toromarika hifankafantarana ny mponina rehetra, miala tsiny aho fa tsy azoko lazaina anareo ilay fifamantarana ho fiarovana ny fokontaninay. Efa nivonona ihany koa fa rehefa tonga ny fanairana dia mirohotra avokoa indray.
Tonga ny ampitso zoma 6 martsa 2009, efa niandry izay mety ho fiavian'ny "TGV" (miala tsiny aho fa izay tsinona no anarana nentin'ny mpanafika ny fokontaninay) ny teto an-tanàna. Kanjo moa tsy tonga mihitsy ry zalahy fa sahirana niandry ny tranon'ny lehibeny teny Ambatobe angamba koa dia niandry vasoka ny teto an-tanàna. Tena hivaona kely indray aho, nanao ahoana tokoa ny teny Ambatobe. Ny nalaza moa dia ny fiantsoana ny "andrimasom-pokonolona" hiaro ny tranon'ny lehiben'ny governemantam-pikomiana satria saika hisy hisambotra hoe ny mpitondra avo ny alin'ny alakamisy 5 martsa hifoha zoma 6 martsa, ny Emmo nat (4X4 pick up) niaraka tamin'ny fiaraben'ny Samva (sampana misahana ny fandraofana fako eto Antananarivo) roa moa nandeha tamin'iny lalan'Ambatobe iny. Tsy tonga hisambotra olona izany fa hanala ny fanariam-pako lehibe lasa fanaovan-dry zalahy barazy no anton-dian-dry zareo. Tsy nahomby moa izany fa tavela ireo fiarabe roa noho ny fahavononan'ny mpiambina an'i Andry hifampitifitra amin'ny alalan'ny basy izay mitady hanafika azy. Hany herin'ny tao anaty pick up (Emmo nat) niala ny faritra. Hitantsika ao amin'ny sobika moa ny niafaran'ireo fiarabe roa an'ny Kaominina fa nangalarana piesy sy nodorana ireo fiara ireo (ka ny "TGV" no nandoro azy na dia fantatra aza fa fananam-panjakana ireny... mahatsapa tena ve ry zareo fa tsy hitantana an'Antananarivo intsony matoa nodorana ireo fiarabe roa ireo?
Ny atoandro moa dia tsy ny hisambotra an'i Andry hatrany no iraka nampanaovina indray ny Emmo nat fa ny hanavotra ireo ankizy mpianatra tao amin'ny lisea frantsay. Nafana dia nafana ny fifandonana hatreny Andranobevava, Analamahitsy, Ambatobe nefa amin'ny mahaatoandro ny andro tsy maintsy natao izay hahatontosa ny iraka fa tsy handamoka toy ny alina teo indray. Eto no tsy mazava, tsy niantso ny Emmo nat ve ny tao amin'ny lisea (mba ahafahan'ny mpitandro filaminana frantsay miditra eto Madagasikara raha tsy nahomby teo ny asam-panavotana) satria nitady fifanarahana tamin'ireo mpanao barazy izay tsy namela ny mpianatra sy ny mpampianatra tao amin'ny lisea raha tsy mametraka kely (manome vola ny dikan'izany ho an'izay tsy mahalala tahaka ahy!). Ny nahavariana manko dia maro ireo mpitati-baovao frantsay no tsy nanisy teny mihitsy izay nataon'ny Emmo nat, tsy tao anatin'ny paika angamba ilay fahombiazan'ny mpitandro ny filaminana malagasy. Nasiaka tamin'ny alalan'ny tora-bato sy cocktail molotov manko ny mpiandry ny tanàna nefa dia resy tosika ihany sady nisy voasambotra aza.
Tonga ny sabotsy 7 martsa, hanao diabe hoe ry TGV ka dia nataony tokoa izany, niainga tany Ankatso tany ny iray kanefa voasakana teo anoloan'ny mascotte (Antsahabe). Raikitra ihany koa ny saiky hiakatra hatreny Ambohidahy saingy voasakana teo anoloan'ny faritany ireo mpitondra tenyn'ny mpanao fihetsiketsehana, somary lavidavitra ihany manko ny ankamaroan'ny mpanao fihetsiketsehana. Toa ireto no nandeha tety amin'ny faritry 67ha manoloana ny Ny Havana. Niaraka tamin'ny tabataba moa izy ireto ka nanaitra ny mponin'i 67ha nisy anay. Velona ny fanairana, lasa izao. Fahadisoana hatrany hoy aho matetika ny fandalovan'ny mpanao fihetsiketsehana faritra iray ao anatin'ny maha andro tsena azy indrindra. Tsy mahagaga raha misy maromaro indray no voaroba vetivety teo ireo mpanao tsena Asabotsy aty. Azo noheverina fa nilamina ihany ny mpanao fihetsikatsehana kanjo nahazo tora-bato vetivety teo ry zareo. Velona amin'izay ny fifampitorahana, raha nojerena maimaika dia maro an'isa kokoa ny TGV noho ny mpiaro ny fokontaniny tsy ho voaroba. Samy tsy nisy niala mihitsy ny roa tonta (izahay mponin'i 67ha avaratra misy anay) sy ny mpanao fihetsiketsehana mety ho tsy nahalala akory izay handefasana azy aty 67ha (Valifatin'ilay resy tosika tamin'ny alakamisy). Marihina fa maro tamin'ny mponin'i 67ha no nifidy TGV ary mpanohana mafana fo tamin'izany ilay notonintononin'ny Viva ho lohan'ny "gros bras" (Ra-bidon... efa nitantara ity ranamana ity aho ho an'izay efa nanaraka ny bolongako hatry ny ela) nanampy ny Emmo nat saingy tsy manaiky kosa ny hanafihana sy handrobana ny fokontaniny. Rehefa ela nifampitana teo ny roa tonta dia nanapoaka basy tampoka ilay zandary mipetraka eto amin'ny fokontany ihany koa saingy nanao fanamiana sivily sy miaro ny fokontaniny, ka nampirifatra ireo "mpanafika" ka nitabataban'ny radio sasany fa nisy fizarana basy tety amin'ny tanàna hifamonoan'ny samy Malagasy.
Efa ho ora iray taty aorian'ny fifanandrinana kosa ny Emmo nat vao tonga, tena jenitra tokoa ry zalahy avy any, ka nampirifatra ny TGV hafa rehetra 'izany hoe ny saiky hanafika sy ireo tsy mahalala akory sy mety ho nihevitra ho nosotasotaina.' Ny tena nampihomehy tamin'ity tantara ity dia tsy fahalalan'ny tao amin'ny Viva ny olony, ka nandrisika ihany koa ny tao hoe tsy namantsika ireo nisotasota mitady handroba ireo ka... tena tsy tadidiko ny tohiny fa mety hifandraika amin'ny hoe sambory mihitsy ohatra. Andeha atao hoe mety ho nisy tamin'ny mpitolona tokoa ny nitady filaminana anatin'ity andro iray ihetsehana ity saingy tsy mahalala ny andefasana azy taty 67ha. Mazava loatra fa mety ho niteraka lonilony hafa koa izany noho ny tsy nahalalany ilay valifaty nokasaina hatao amin'ny fokontaninay. Nahita ny fanoherana mivaivay nataonay ihany koa ilay fokontany 67ha avaratra mifanila aminay ka nanampy anay ihany koa, ary nanala ny vato rehetra notadiavina atao sakana hakana vola ny mpitondra fiara eny an'arabe. Tafavondrona hanohitra ny barazy tampoka teo ny taty amin'ny 67ha avaratra manontolo tamin'ity andron'ny sabotsy 7 martsa ity. Lasa nanao ilay marika fifankafantarana ihany koa ry zareo (tsy fantatro mazava aloha hoe ambaratonga hatraiza no tena nanapa-kevitra tamin'ity marika fifankafantarana ity satrai taratara hatrany aho vao tonga taty an-tanàna.
jentilisa, alahady 8 martsa 2009 tamin'ny 00:36 ora maraina